Dhaamsa Ariifachiisaa Quuqamtoota Poolisii Humna Addaa Oromiyaarraa kenname. – Kichuu
HomeNewsAfricaDhaamsa Ariifachiisaa Quuqamtoota Poolisii Humna Addaa Oromiyaarraa kenname.
Akkuma kanaan dura keessaan walqunnamaa turre miseensi baay’een waamicha WBO nuyiif godhe simachuun gariin gara qabsootti makamaa, gariin immoo hojicha dhiisee akka adeemaa jiru quba qabna. Kanaafis galanni keessan Bilisummaa haata’u isiniin jechuu feena. Haata’u malee amma akkuma hundi keenya beeknu, Humni Addaa Naannoolee Itoophiyaa federaala jala galuuf tahuun dhagahame. Lolli RIB fi Humna Addaa Naannoo Tigraay gidduutti erga jabaateen
booda gaaffiin Humni Addaa jiraachuu hin qabu jedhu dhiyaachaa ture. Keessumaa Paartiin EZEMA ibsa garaa garaa baasuu fi Professor Biraanuu Naggaa Abiyyiidhaan Humni Addaa akka diigamu gorsaa turuun isaa ni beekkama. Dabalataan Humni Addaa Naannoo Amaaraa Naannoo Tigraay keessaa seenee hin bahu; daangaa Tigiraay hin seenne jechuun erga dhagahamee Humni Addaa Naannoolee akka diigamu murteeffamee jira. Abiy wixinee kana irratti qophaa’ee mana Maree Ministeerotaaf gaafa Bitootessa 30/2013 ibsuuf akka jiru; akkasumas hoggaansi komishiinii Humna Addaa Oromiyaa sadarkaa sadarkaan jiru diigamaa akka jiru nu martuu quba qabna. Walumaa galatti miseensi keenya kanarraa waan guddoo hubattu jedheen yaada. Nuti Habashaa waliin tokko taanee Gaaddisa Hoggaansa Federaalaa jalatti kanaan booda Oromoof ni dhaabanna jechuun abjuudha. Malata maladhu jedhe Eebboon. Kanaaf akkuma keessaan kana dura iccitiin hojjechaa baane ammas itti haa
fufnuun dhaamsa keenya. Kanneen haftaniis yeroon isin Uummata keessaniif hojjechuu qabdan har’a waan ta’eef ammuma of murteessaati tarree Gootota Oromoo seenaan maqaa dhooftutti dabalamaa. WBO waraana ofii du’ee Uummata isaan jiraadhu jedhuudha. Waraana kana faana hiriiranii qabsaa’uun carraa qabeessa nama taasisa.
WBO’n dhiiga keenya!
WBO waliin fuuldurri keenya ifa!
Galata Quuqamtoota Humna Addaa Poolisii Oromiyaaf
Cibraa Soddom Booroo
Basaastotni Eertiraa iyyama Baandaa,Abiy Ahmediin Itoophiyaa galuun sektara nageenyaa erga dhuunfatanii booda galmee fi eenyummaa(Profile) hidhamtoota siyaasaa ABO fi KFO funaanuu irratti argamu. Namootni hedduun Qaallittii fi Qilinxoo keessaa dhabamsiifamaa jiran gara manneen hidhaa Eertiraatti dabarfamaa akka jiran mirkaneeffanneerra. Oromoon ilmaan kee eeggadhu; diina harkaa baafadhu.